Than Win Hlaing – Thakhin Than Tun | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Cartoon Win Pe – accurate driver 2	Cartoon Saw Ngo – USDP Government’s Advisor →	Than Win Hlaing – Thakhin Than Tun	04
ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၁
သခင်သန်းထွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သော ၆၃ နှစ် အတွင်းက ထင်ရှားခဲ့သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၅၄ နှစ်အတွင်းတွင် သခင်သန်းထွန်းသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦး အဖြစ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့လေသည်။ သခင်သန်းထွန်း၏နာမည်ကို ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် လောကတွင်သာမက ကမ္ဘာ့ကွန်မြူနစ်လောကတွင်လည်း ထင်ရှားခဲ့သည်။
သခင်သန်းထွန်းသည် နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့သူဖြစ်သည်။ မြန်မာ့တော်လှန်ရေး သမိုင်းအဆက်ဆက်တွင်လည်း သခင်သန်းထွန်းသည် ရှေ့တန်းက ပါဝင်ခဲ့သည်သာ များသည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်အဖြစ် ၁၃၀၀ ပြည့် ရေနံမြေအလုပ်သမားအရေးနှင့် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံတို့တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သလို တောင်သူလယ်သမားတို့၏ အရေးကိုလည်း ရှေ့ဆောင်လုံးပမ်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သလို ဖက်ဆစ်ဂျပန် တော်လှန်ရေး ပျောက်ကျားစစ်တွင်လည်း ဦးစီးခဲ့သူတဦး ဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ လှုပ်ရှားမှုတွင်လည်းကောင်း ကွန်မြူနစ်အင်အားစုကြီးကို စည်းရုံး၍ ဦးစီး ရှေ့ဆောင်ခဲ့သူမှာလည်း သခင်သန်းထွန်းပင် ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာက သူ၏ ‘ရုပ်ပုံလွှာ’ စာအုပ်တွင် သခင်သန်းထွန်းအား ဤသို့ မှတ်တမ်းတင် ရေးဖွဲ့ထားသည် – “သခင်သန်းထွန်းကို လူချင်းမသိမီကတည်းက အမည်ကိုကြားဖူးနေ၏။ ကိုဗဟိန်းက သခင်သန်းထွန်း၏အကြောင်းကို မကြာခဏ ကျွန်တော့်အား ပြောပြ၏။ ထိုအခါက ကိုဗဟိန်းသည် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာရှိ သထုံကျောင်းဆောင်တွင်မရှိဘဲ မြို့ထဲ ၃၈ လမ်းရှိ ဇဝန တို့ စုနေကြသော အိမ်တွင် ရောက်နေတတ်၏။ ထိုအိမ်တွင် သခင်သန်းထွန်းလည်း နေ၏။ “သခင်သန်းထွန်းဆိုတာ တော်တော်စာဖတ်တယ်ဗျ၊ မာ့က်စ်စာပေလည်း အတော် ဖတ်တယ်။ စားရေးလည်း ကောင်းတယ်” ဟု ကျောင်းဆောင်သို့ပြန်ရောက်လျှင် ကိုဗဟိန်းက ကျွန်တော်အား ပြောပြလေ့ရှိ၏ စိတ်ထဲတွင် သခင်ပေါက်စတဦးပဲဟုသာ အောက်မေ့လိုက်၏။ တနေ့တွင် ကိုဗဟိန်းနှင့်အတူ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ ထွန်းအေး စာအုပ်ဖြန့်ချိရေးဌာနသို့ ရောက်သွားရာ သခင်သန်းထွန်းနှင့် သွားတွေ့၏။ ကိုဗဟိန်းက ကျွန်တော့်ကို သခင်သန်းထွန်းနှင့် အသိဖွဲ့ပေး၏။ “ဪ … ဪ … ခင်ဗျားအကြောင်းကိုလည်း ကိုဗဟိန်းက ခဏခဏ ပြောပြပါတယ်ဗျ” ဟု သခင်သန်းထွန်းက ပြုံးကာ ပြောလေသည်။ သူသည် မန္တလေး ပိုးအပေါ်ဖုံး၊ ပိုးလုံချည်ဝတ်ထား၏။ မျက်နှာမှာ ခပ်လုံးလုံး အရုပ်ဆိုးသည် ဟု ခေါ်ရပေမည်၊ အသားက ဝါလဲ့လဲ့၊ ဆံပင်ကောက်၏၊ အထူးခြားဆုံးမှာ ခေါင်းကြီးခြင်း ဖြစ်၏။ အမူအရာမှာ ပျော့ပျောင်း၏၊ စကားပြောသောအခါလည်း ခပ်အေးအေးနှင့် သိမ်မွေ့စွာ ပြော၏။ အစက ထင်ထားသကဲ့သို့ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ဟစ်အောင်သူ မဟုတ်၊ ညင်းညင်းညံညံ လေသံနှင့်၊ ကဗျာဆရာ မီလတန်၊ လီနင်ဝါဒ၊ ကိုလိုနီခေတ်တော်လှန်ရေး၊ ဘားနတ်ရှော ပြဇာတ်၊ ချားလ်စ်ဒစ်ကင်း၏ဝတ္ထု၊ ဗြိတိသျှပါလီမန်၊ ဦးကုလားရာဇ၀င်၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၏ ခေတ်စမ်းစာ၊ နတ်သျှင်နှောင်ရတု စသော အကြောင်းအရာများကို ပြောပြ၏၊
နောင်မှ သူသည်ဆရာဖြစ်သင် ကောလိပ်ကျောင်းမှ ထွက်ကြောင်း၊ ကျောင်းနေစဉ်က စာတော်သူတဦးဖြစ်ခဲ့၏။ တခါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသော ဆောင်းပါးတစောင်ကို တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ မဂ္ဂဇင်းဟောင်းတစောင်တွင် ဖတ်ရဖူး၏။ သူသည် အင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်နင်းစွာ ရေးနိုင်သူ တဦးဖြစ်၏။ ဂျပန်ခေတ် သူ ဝန်ကြီးဖြစ်စဉ်က သူ ရေးထားသော အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်၍ နောင်ဖဆပလခေတ် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ ကိုကျော်ငြိမ်းက “အင်္ဂလိပ်စာရေးတာ မြန်သလောက် ကောင်းတာပါပဲ” ဟု ချီးကျူးသည်ကို ကြားရဖူး၏။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်က တို့ဗမာအစည်းအရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့သည် ကွန်ဂရက်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အိန္ဒိယပြည် ရမ်းဂါး သို့ သွားကြ၏။ သခင်အောင်ဆန်း၊ ကိုဗဟိန်း၊ သခင် သန်းထွန်းတို့ ပါသွားကြ၏။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင် သန်းထွန်းတို့ကို မကြာခဏဖိတ်၍ စကားပြောစေသည်ဟု သိရ၏။ သခင်သန်းထွန်းကို ပွဲတောင်းလှသည်ဟု ကြားရ၏။ ဂျပန်ခေတ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဖြစ်စဉ်က သူ့ဌာနတွင်လုပ်သော အတွင်းဝန်များသည် သူ့ကို လေးစားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးကို လေ့လာနားလည်ပြီး၊ ညာဝါးဖြန်းသန်းကာ မဆိုင်သည်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မလုပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်” ဟူ၍ ရေးသားထားလေသည်။
သခင်သန်းထွန်းသည် မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ စာရေးကောင်းသူဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်စာပေများ ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်က အရေးတော်ပုံ အမည်ရှိ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဂျာနယ်ကိုလည်း လျှို့ဝှက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်ကလည်း သူ၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း (၁၉၄၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် စနေနေ့) တွင် သခင်သန်းထွန်းအား “သူသည် အတော်လေ့လာသော လူတယောက်ပါပေ။ အရေးလည်း ကောင်းပါပေသည်။ ‘သုပဏ္ဏက’ ဟူသော ကလောင်အမည်ဖြစ် သူ ရေးသော ဆောင်းပါးများကို ကျွန်ုပ် အယ်ဒီတာဖြစ်စဉ်က ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ဖူးလေပြီ၊ သခင်အစည်းအရုံး တွင်လည်း သူတယောက်မှာ နိုင်ငံရေးစာပေ ဗဟုသုတကို အဆည်းပူးဆုံးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ် အကဲခတ်မိသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အခြေအနေအမှန်ကို အတော်ပင် စမ်းဝါးမိသူ ဖြစ်ပေသည်” ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
သို့ကလို ထူးချွန်ထက်မြက်၍ နိုင်ငံရေးသမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့သော သခင် သန်းထွန်းကို ၁၉၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တောင်ငူခရိုင် ကညွတ်ကွင်းမြို့၌ အဖ ဦးဘိုးမောင်၊ အမိ ဒေါ်အေးကြူ တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၆ ဦးအနက် တတိယမြောက် ဖြစ်သည်။ သူ့အထက်အကိုတို့မှာ ဦးတင် (သာယာဝတီ ထောင်မှူးဟောင်း)၊ ဦးညီပု တို့ဖြစ်ပြီး သူ့အောက် ညီနှင့်ညီမတို့မှာ မစိမ်းညို၊ ကိုညီလေး၊ မစိမ်းချို (မမြဝင်း) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ သခင်သန်းထွန်းသည် ပျဉ်းမနားမြို့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်း (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) ကို အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရာဇဝင်၊ မြန်မာစာတို့၌ ဂုဏ်ထူး သုံးဘာသာဖြင့် အောင်မြင်ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ ဆရာဖြစ်သင်ကောလိပ်တွင် ပညာဆက်လက် သင်ကြားခဲ့သည်။ ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းမှ ဆင်းပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကလေးရပ်ရှိ ဘားမား မွတ်ဆလင် အထက်တန်းကျောင်း (ယခု အထက-၆ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်) တွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့လေသည်။ ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု ကာလ ၁၉၃၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် သခင်သန်းထွန်းသည် တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၃၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် သခင်နု၊ ဦးထွန်းအေး၊ ဦးအုန်းခင်တို့နှင့်အတူ နဂါးနီစာအုပ်အသင်း တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင်လည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ အမှုဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူကာ ဆက်လက်ပါ ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပေသည်။ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်းဂါးမြို့ (Ramgarh) ၌ကျင်းပသည့် အိန္ဒိယ ကွန်ဂရက်ပါတီညီလာခံသို့ တို့ဗမာအစည်းရုံး၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်တင်အောင်၊ သခင်အုန်းမြင့် (တိုးတက်ရေး) ကိုထွန်းရှိန်၊ ကိုဗဟိန်း၊ သခင် ဆင်ဂူပတားတို့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိလာသော မာ့က်စ်ဝါဒစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုကာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၌ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင်းတွင် သခင်သန်းထွန်းသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ထောင်ကျခဲ့လေသည်။ ၁၉၄၂ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဂျပန် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၌ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင် မြေယာနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ပြင်ဆင်မှုကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ခေတ် လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့သစ်၌ မြေနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သခင်သန်းထွန်းသည် ကုန်စည်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဖတပလအဖွဲ့ကြီးကို ၁၉၄၄ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာ သခင်သန်းထွန်းသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် မဟာမိတ်များဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် သခင်သန်းထွန်းသည် နာမည်ဝှက် လက်သည်း အမည်ဖြင့် ဂျပန်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရန် ၁၉၄၅ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မှ ထွက်ခွာသွားသည်။ သခင်သန်းထွန်းသည် ၁၉၄၂ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြောင်းမြမြို့၌ နေထိုင်သော ဦးဖိုညင်း ဒေါ်ဖွားစုတို့၏ သားသမီး ၉ ဦးအနက် ပဉ္စမမြောက်သမီး ဒေါ်ခင်ကြီး (ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အစ်မ) နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ခင်ကြီးသည် သခင် သန်းထွန်းထက် အသက် ၂ နှစ် ကြီးသည်။ ဒေါ်ခင်ကြီးသည် သခင်သန်းထွန်းနှင့် အိမ်ထောင် မကျခင်က အိမ်ထောင် ၂ ဆက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမအိမ်ထောင်မှာ မြောင်းမြမြို့မှ ရဲအကြပ် ဦးစောမောင် ဖြစ်ပြီး၊ သား ခင်မောင်အေး ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ နောင်တွင် တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက်စစ်မှုထမ်းရာ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး ခင်မောင်အေး(မန္တလေး) ကလောင်အမည်ဖြစ် စာပေများ ရေးသားခဲ့သူဖြစ်သည်။ သို့သော် မလိခ၏ မြန်မာစာပေအဘိဓာန်အတွဲ(၁) စာမျက်နှာ ၁၈၉ ၌ ဦးခင်မောင်အေး၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည် – ခင်မောင်အေး (မန္တလေး) [၁၉၃၁- ] မြောင်းမြဇာတိ၊ ၁၉၃၁ ဖွား၊ အဖဦး ဖိုးညင်း၊ အမိ ဒေါ်ဖွားစု၊ မြောင်းမြ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း တို့တွင် ပညာသင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ မှစ၍ တပ်မတော်တွင် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ မှ စ၍ ကဗျာနှင့်ဝတ္ထုတိုများကို စရေးသည်။ ကျားနှင့်မုဆိုး (၁၉၆၅) ဝတ္ထုတိုစုပေါင်းစာအုပ်ကို ထုတ်ခဲ့၏ ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာစာပေ အဘိဓာန်ကိုပြုစုခဲ့သူ ဆရာမင်းကျော်(မလိခ) အား မကွယ်လွန်မီက စာရေးသူက မေးမြန်းခဲ့ရာ –
“သူ (ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်အေး(ငြိမ်း) ရေးပေးတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ရေးသားထုတ်ဝေ လိုက်တာပါပဲ၊ အမှားအမှန်ကတော့ သူနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးခင်မောင်အေး၏ မိဘများမှာ ဦးစောမောင်၊ ဒေါ်ခင်ကြီး ဖြစ်ပါလျက် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အဖိုး အဖွားနာမည်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် ဒေါ်ခင်ကြီးသည် ဦးစောမောင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် စာရေးဆရာ ပါရဂူ (ဦးလှကြိုင်)၏ ဦးလေး ဦးမောင်မောင်ကျော်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဆွေမျိုးများ၏ ခလောက်ဆန်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်ကာ နှစ်ဦးသဘောတူ ပြတ်စဲ၍ သခင်သန်းထွန်းနှင့် အကြောင်းပါခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ ဇူလိုင်လတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဒုတိယကွန်ဂရက်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ရာ သခင်သန်းထွန်းသည် ဗဟိုကောင်မတီဝင်အဖြစ် သခင်ဗဟိန်း၊ သခင်သန်းဖေ၊ သခင်တင်ထွန်၊ သခင် သန်းမြိုင်၊ သခင်မြသွင်၊ သခင်ဇင်၊ ဗိုလ်ကျော်ဇော (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) တို့နှင့် အတူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာ သခင်သိန်းဖေ (သိန်းဖေမြင့်) ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သခင်သန်းထွန်းသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဖဆပလအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၄၆ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သခင်သန်းထွန်း ဦးဆောင်သည့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလေသည်။ ၁၉၄၈ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီတွင် ဖဆပလ အစိုးရက တနိုင်ငံလုံး၏ ကွန်မြူနစ်များကို ဖမ်းဆီးရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ရာ သခင်သန်းထွန်းသည် အစိုးရကို တော်လှန်ပုန်ကန်ကာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုဦးဆောင်၍ တောခိုခဲ့သည်။ သခင်သန်းထွန်း၏ တောတွင်းလျှို့ဝှက်အမည်မှာ ဦးသာဒင် ဖြစ်သည်။ သခင်သန်းထွန်းသည် သူ၏ ကွန်မြူနစ်ပြောက်ကျားတပ်များကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမြဲတမ်းတပ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ် ကြေညာ၍ မိမိကိုယ်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သခင် ဗသိန်းတင်၊ ဗိုလ်ဇေယျ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)၊ သခင်သန်းမြိုင်၊ သခင်ချစ်၊ သခင်တင်ထွန်း၊ ဗိုလ်ရဲထွဋ် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)၊ ဗိုလ်စိန်တင်၊ ဗိုလ်စိုးမောင် တို့ကို ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ရန်အောင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)နှင့် ဗိုလ်အောင်မင်းတို့ကိုမူ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်များ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပြည်သူ့တပ်မတော်အောက်တွင် တပ်မကြီး ၄ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား၍ တပ်မကြီး (၁) ကို ဗဟိုဌာနချုပ်တည်ရှိရာ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် အခြေစိုက်ထားသည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်ပြည်သို့ စစ်ပညာသင်ကြားရန် ပထမအသုတ်အဖြစ်ကို အောင်ကြီး (နောင် ပီကင်းပြန် အောင်ကြီး)၊ ဝေါမြို့နယ်မှ ကိုနေဝင်း၊ ပဲခူးမှ အိုင်ဆေး ခေါ် ဗိုလ်တိုက်အောင်၊ တောင်ငူမှ ကိုစံဖေ၊ ရေတပ်မှ တောခိုလာသူ ဗိုလ်မြမင်းတို့ကို သခင်သန်းထွန်း သည် စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဗဟိုကော်မတီဝင် အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရလမ်းစဉ်ကို သခင်သန်းထွန်း ချမှတ်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ၃ ပါတီ (အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗကပ၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်) ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကို ယောဒေသ ပုံတောင် ခြေခသာရွာ (ပြည်သူ့ရဲဘော်နယ်)၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ သရက်ခရိုင် မင်းလှမြို့နယ် လက်ပန်ခုန်ရွာတွင် ၃ ပါတီ ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့သော်လည်း သဘောတူညီမှု မရခဲ့ချေ။ ၁၉၅၂ ခုနှစ် ပခုက္ကူခရိုင် ပုံတောင်ပုံညာ ဒေသတွင် သုံးပါတီ ညီညွတ်ရေး ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က တွေ့ရသည့် ဗိုလ်ထွန်းလင်း (ပြည်သူ့ရဲဘော်) (ဝဲ)၊ သခင်သန်းထွန်း (ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ) (အလယ်)၊ သခင်စိုး (ကွန်မြူနစ်ပါတီ-ဗမာပြည်) (ယာ)။ (ဓာတ်ပုံ – ပြည်သူ့အာဏာ ဂျာနယ်)
၁၉၅၄ ခု သြဂုတ်လမှ ၁၉၅၅ ဇန်နဝါရီလအထိ ပခုက္ကူ၊ ဆိပ်ဖြူ၊ ပေါက် ၃ နယ်အစပ် ထွန်ရွာနှင့် သက်ကယ်ကျင်းရွာအနီး၌ သခင်သန်းထွန်းသည် ၆ လခန့် ခိုအောင်းနေထိုင်ပြီး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူ၍ ၅၅ လမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းလမ်းစဉ်ကို သခင်လှမြိုင် (ဗိုလ်ရန်အောင်)က “သခင်သန်းထွန်း (၅၅) လမ်းစဉ်ကား ခင်ဗျား ခေါင်းထဲက ထွက်လာတဲ့လမ်းစဉ် မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားကပို့ပေးလိုက်တဲ့ လမ်းစဉ်၊ ဒါ့ကြောင့် ဒီလမ်းစဉ် အောင်မြင်ရေးကို ခင်ဗျား ခေါင်းဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဥက္ကဋ္ဌနေရာက ဆင်းပေးပါ” ဟု တောင်းဆိုခဲ့လေသည်။ ဤတောင်းဆိုမှုကို ကိုတုတ်၊ ကိုစိုးသန်း၊ သခင်ဖေတင့်နှင့်အဖွဲ့က ထောက်ခံခဲ့သည်။ မဲခွဲဆုံးဖြတ်သောအခါ သခင်သန်းထွန်းသည် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်မှ ဆင်းပေးရေး အဆိုသည် ရှုံးနိမ့်သွားသောကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌရာထူး တည်မြဲခဲ့လေသည်။
ထို့နောက် မြေအောက် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် သခင်သန်းထွန်းသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အထိ တာဝန်ယူခဲ့လေသည်။ ၁၉၆၃ သြဂုတ်လတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သခင်သန်းထွန်းက ပါတီအတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်ဌေး ခေါင်းဆောင်သော ပဏာမ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့ရာ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ယင်းအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် အကြိုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ပြားသွားခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ တွင် စစ်နိုင်ရေး၊ အာဏာသိမ်းရေး၊ ၆၄ လမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပြန်သည်။ ထို့နောက် သခင်သန်းထွန်းသည် ဖြုတ်၊ ထုတ်၊သတ် ပါတီတည်ဆောက်ရေး လမ်းစဉ်အမှားကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ် ၁၉၆၇ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်ဌေးနှင့် ဗကပ ပေါလစ်ဗြူရိုအဖွဲ့ဝင် ရဲဘော် ဘတင် (ဂိုရှယ်) တို့ကို သခင်သန်းထွန်း၏အမိန့်ဖြင့် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်။ တဖန် ယင်းနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဗကပ ဗဟိုကောင်မတီဝင် ဗိုလ်ရန်အောင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) အား သခင်သန်းထွန်း၏အမိန့်ဖြင့် ဗဟိုစခန်းမှ တပ်နီအမျိုးသမီး အမြင့် (ခ) မစန်းဝင်းက ခြေထောက်ဖြင့် လည်မျိုကိုနင်း၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ၁၉၆၈ ခု သြဂုတ် ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပီကင်းပြန် ဗိုလ်ထွန်းငြိမ်းကို သတ်ခဲ့ပြန်သည်။ ထိုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဗကပမှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြန်သည်။ ထို့နောက် ၁၉၆၈ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ မိနစ် ၂၀ အချိန်တွင် တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်း ပဲခူးရိုးမအရှေ့စောင်း ကျောက်ချောင်း ကမ်းပါးရှိ တောင်ကျောလေးပေါ်တွင် သခင်သန်းထွန်းသည် အခင်းသွားနေစဉ် ကြုံတိတ် ခေါ် ရဲဘော်မြကြီး ဆိုသူက ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ် ပစ်ခတ်လုပ်ကြံသောကြောင့် သခင်သန်းထွန်း ပွဲချင်းပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ သခင်သန်းထွန်းအား ရဲဘော်မြကြီး သေနတ်ဖြင့် လုပ်ကြံပစ်ခတ်ခဲ့ပုံကို ၁၉၆၈ ခု နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ အသံလွင့်ရုံ၌ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းရှင်းလင်းပွဲ၌ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကောင်မတီဝင် ပဲခူးရိုးမတိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးမြ ခေါ် ရဲဘော်မြသည် သတင်းစာဆရာများအား အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့သည်။
“လွန်ခဲ့သည့်စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က မိမိတို့သည် တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့နယ် အနေက်ဘက် ရိုးမတောင်စွယ်တွင် ဗဟိုစခန်းချခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ ညနေ ၅ နာရီကျော်ခန့်တွင် ဥက္ကဋ္ဌသခင်သန်းထွန်းသည် အခင်းကြီးစွန့်ရန် တောင်ခြေသို့ဆင်းသွားပြီး မကြာမီပင် သေနတ်သံ တချက် ကြားရသည်။ သေနတ်သံကြား၍ မိမိကလှမ်းအကြည့်တွင် လုံချည်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မကာ တောင်ခြေမှ ဗဟိုစခန်းပေါ်သို့ ပြေးတက်လာပြီး၊ “ဘယ်ကပစ်လိုက်တယ် မသိဘူး” ဟု တခွန်းသာ ပြောနိုင်သည်။ မိမိက သေနတ်သံလာရာကို လိုက်ကြည့်အပြီး ပြန်အလာတွင် သေဆုံးသွားသည်။ နစ်ဖြူ ဆေးမှူး ကိုလှမောင်၏ စစ်ဆေးချက်အရ သေနတ်ကျည်ဆန်သည် ဘယ်နံစောင်းက ဝင်ကာ ညာဘက်နို့အုံမှ ပေါက်သွား၍ နှလုံးထက်မှ သွေးကြောမကြီး ပြတ်သွားသည်ဟု သိရသည်။ ဆေး လုံးဝကုမရတော့ဘဲ ၅ မိနစ်တွင်း သေဆုံးသွားသည်။ ထိုညမှာပင် နစ်ဖြူ ဗဟိုစခန်းကို နေရာပြောင်းရွှေ့ကာ တရက်ခရီးသွားအပြီးတွင် သခင်သန်းထွန်း ၏အလောင်းကို လျှို့ဝှက်စွာ မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ပြောကြားသွားသည်။ သခင်သန်းထွန်း အလောင်းမြုပ်နှံရာဒေသကို တပ်မတော်ကတွေ့ရှိခဲ့ပုံကို တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဦး (နောင် ထောက်လှမ်းရေး အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ် (မျက်မှန်တင်ဦး) က ပြောကြားရာတွင် –
“သခင်သန်းထွန်းအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခဲ့သူ မြကြီးပြောကြားချက်ကို မိမိတို့ဆန်းစစ်ရန် အတွက် မိမိသည် တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တပ်မ(၇၇) မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ သခင်သန်းထွန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့်နေရာသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် နစ်ဖြူများသည် စခန်းကို ဗြုန်းစားကြီး ပြောင်းရွှေ့ခဲ့၍ ပလပ်စတစ် အမိုးအစများ၊ ဝါးတိုင်များတွင် စတင်ပြတ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သခင်သန်းထွန်း အလောင်း သယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ခုတ်ယူသွားသည့် ဝါးငုတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုးဆေး ပုလင်းများ၊ သွေးစသွေးနများကိုလည်းကောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် မောင်မြကြီး၏ သေနတ်ကို စီအိုင်ဒီ (ရဲမှုခင်းတပ်ဖွဲ့) သို့ပို့၍ စစ်ဆေးခြင်း၊ သခင်သန်းထွန်း လဲကျခဲ့သည့်နေရာမှ သွေးစများကို ဒေါက်တာ မောင်မောင်တိတ် အား ဓာတ်ခွဲကြည့်စေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သခင်သန်းထွန်းအား မြှုပ်နှံထားသည့်နေရာကို နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရှာဖွေခဲ့ရာ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ဦးမြ(ရဲဘော်မြ)၏ လမ်းညွန်မှုဖြင့် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သခင်သန်းထွန်း၏ ရုပ်အလောင်းသည် ပလပ်စတစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီး မြှုပ်နှံခဲ့သည့် အတွက် ညာဘက် လက်မောင်းပင် အသားများ ရောင်ယမ်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်များ မအုံမီ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး သခင်သန်းထွန်း၏ အလောင်းကို တူးဖော်တွေ့ရှိသည့်နေ့မှာပင် ကောင်းမွန်စွာ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ပြောကြားသွားသည်။ သခင်သန်းထွန်း ကျဆုံးသောအခါ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြီးနှင့် သား နှစ်ယောက်၊ သမီး တယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ သခင်သန်းထွန်း၏ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြီး (၉၂) သည် ၂၀၀၁ ခု ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ် (၅၄) နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့လေသည်။ (က) မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁၃) စာ ၁၃၇ . ၁၄၈၊ (ခ) မလိခ မြန်မာစာပေအဘိဓာန်ပထမတွဲ ၊ သစ္စာစာပေ ပတွဲ ၁၉၇၄၊
(ဂ) Who’s who in Burma pp.193.
(ဃ) သခင်သန်းထွန်း၏ နောက်ဆုံးနေ့များ ပတွဲ ၊ ဒုတွဲ၊ (င) ရှေ့သို့စာစောင် တွဲ ၁၄ မှတ် ၂ (၁၅.၁၂. ၆၈)၊
(စ) ဒေါ်ခင်မမ (ခင်ခင်သန်း) သခင်သန်းထွန်း၏ သမီးပြောပြချက်များ (၁၆.၃.၀၉) သမိုင်းတကွေ့မှ ဗကပ ဥက္ကဋ္ဌ သခင်သန်းထွန်း
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာက သူ၏ ‘ရုပ်ပုံလွှာ’ စာအုပ်တွင် သခင်သန်းထွန်းအား ဤသို့ မှတ်တမ်းတင် ရေးဖွဲ့ထားသည် –
“သခင်သန်းထွန်းကို လူချင်းမသိမီကတည်းက အမည်ကိုကြားဖူးနေ၏။ ကိုဗဟိန်းက သခင်သန်းထွန်း၏အကြောင်းကို မကြာခဏ ကျွန်တော့်အား ပြောပြ၏။ ထိုအခါက ကိုဗဟိန်းသည် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာရှိ သထုံကျောင်းဆောင်တွင်မရှိဘဲ မြို့ထဲ ၃၈ လမ်းရှိ ဇဝန တို့ စုနေကြသော အိမ်တွင် ရောက်နေတတ်၏။ ထိုအိမ်တွင် သခင်သန်းထွန်းလည်း နေ၏။
“သခင်သန်းထွန်းဆိုတာ တော်တော်စာဖတ်တယ်ဗျ၊ မာ့က်စ်စာပေလည်း အတော် ဖတ်တယ်။ စားရေးလည်း ကောင်းတယ်” ဟု ကျောင်းဆောင်သို့ပြန်ရောက်လျှင် ကိုဗဟိန်းက ကျွန်တော်အား ပြောပြလေ့ရှိ၏ စိတ်ထဲတွင် သခင်ပေါက်စတဦးပဲဟုသာ အောက်မေ့လိုက်၏။
တနေ့တွင် ကိုဗဟိန်းနှင့်အတူ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ ထွန်းအေး စာအုပ်ဖြန့်ချိရေးဌာနသို့ ရောက်သွားရာ သခင်သန်းထွန်းနှင့် သွားတွေ့၏။ ကိုဗဟိန်းက ကျွန်တော့်ကို သခင်သန်းထွန်းနှင့် အသိဖွဲ့ပေး၏။
“ဪ … ဪ … ခင်ဗျားအကြောင်းကိုလည်း ကိုဗဟိန်းက ခဏခဏ ပြောပြပါတယ်ဗျ” ဟု သခင်သန်းထွန်းက ပြုံးကာ ပြောလေသည်။
သူသည် မန္တလေး ပိုးအပေါ်ဖုံး၊ ပိုးလုံချည်ဝတ်ထား၏။ မျက်နှာမှာ ခပ်လုံးလုံး အရုပ်ဆိုးသည် ဟု ခေါ်ရပေမည်၊ အသားက ဝါလဲ့လဲ့၊ ဆံပင်ကောက်၏၊ အထူးခြားဆုံးမှာ ခေါင်းကြီးခြင်း ဖြစ်၏။ အမူအရာမှာ ပျော့ပျောင်း၏၊ စကားပြောသောအခါလည်း ခပ်အေးအေးနှင့် သိမ်မွေ့စွာ ပြော၏။
အစက ထင်ထားသကဲ့သို့ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ဟစ်အောင်သူ မဟုတ်၊ ညင်းညင်းညံညံ လေသံနှင့်၊ ကဗျာဆရာ မီလတန်၊ လီနင်ဝါဒ၊ ကိုလိုနီခေတ်တော်လှန်ရေး၊ ဘားနတ်ရှော ပြဇာတ်၊ ချားလ်စ်ဒစ်ကင်း၏ဝတ္ထု၊ ဗြိတိသျှပါလီမန်၊ ဦးကုလားရာဇ၀င်၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၏ ခေတ်စမ်းစာ၊ နတ်သျှင်နှောင်ရတု စသော အကြောင်းအရာများကို ပြောပြ၏၊
နောင်မှ သူသည်ဆရာဖြစ်သင် ကောလိပ်ကျောင်းမှ ထွက်ကြောင်း၊ ကျောင်းနေစဉ်က စာတော်သူတဦးဖြစ်ခဲ့၏။ တခါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသော ဆောင်းပါးတစောင်ကို တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ မဂ္ဂဇင်းဟောင်းတစောင်တွင် ဖတ်ရဖူး၏။ သူသည် အင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်နင်းစွာ ရေးနိုင်သူ တဦးဖြစ်၏။ ဂျပန်ခေတ် သူ ဝန်ကြီးဖြစ်စဉ်က သူ ရေးထားသော အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်၍ နောင်ဖဆပလခေတ် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ ကိုကျော်ငြိမ်းက “အင်္ဂလိပ်စာရေးတာ မြန်သလောက် ကောင်းတာပါပဲ” ဟု ချီးကျူးသည်ကို ကြားရဖူး၏။
၁၉၃၉ ခုနှစ်က တို့ဗမာအစည်းအရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့သည် ကွန်ဂရက်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အိန္ဒိယပြည် ရမ်းဂါး သို့ သွားကြ၏။ သခင်အောင်ဆန်း၊ ကိုဗဟိန်း၊ သခင် သန်းထွန်းတို့ ပါသွားကြ၏။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင် သန်းထွန်းတို့ကို မကြာခဏဖိတ်၍ စကားပြောစေသည်ဟု သိရ၏။ သခင်သန်းထွန်းကို ပွဲတောင်းလှသည်ဟု ကြားရ၏။
ဂျပန်ခေတ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဖြစ်စဉ်က သူ့ဌာနတွင်လုပ်သော အတွင်းဝန်များသည် သူ့ကို လေးစားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးကို လေ့လာနားလည်ပြီး၊ ညာဝါးဖြန်းသန်းကာ မဆိုင်သည်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မလုပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်” ဟူ၍ ရေးသားထားလေသည်။
သခင်သန်းထွန်းသည် မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ စာရေးကောင်းသူဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်စာပေများ ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်က အရေးတော်ပုံ အမည်ရှိ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဂျာနယ်ကိုလည်း လျှို့ဝှက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်ကလည်း သူ၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း (၁၉၄၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် စနေနေ့) တွင် သခင်သန်းထွန်းအား “သူသည် အတော်လေ့လာသော လူတယောက်ပါပေ။ အရေးလည်း ကောင်းပါပေသည်။ ‘သုပဏ္ဏက’ ဟူသော ကလောင်အမည်ဖြစ် သူ ရေးသော ဆောင်းပါးများကို ကျွန်ုပ် အယ်ဒီတာဖြစ်စဉ်က ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ဖူးလေပြီ၊ သခင်အစည်းအရုံး တွင်လည်း သူတယောက်မှာ နိုင်ငံရေးစာပေ ဗဟုသုတကို အဆည်းပူးဆုံးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ် အကဲခတ်မိသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အခြေအနေအမှန်ကို အတော်ပင် စမ်းဝါးမိသူ ဖြစ်ပေသည်” ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
သို့ကလို ထူးချွန်ထက်မြက်၍ နိုင်ငံရေးသမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့သော သခင် သန်းထွန်းကို ၁၉၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တောင်ငူခရိုင် ကညွတ်ကွင်းမြို့၌ အဖ ဦးဘိုးမောင်၊ အမိ ဒေါ်အေးကြူ တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၆ ဦးအနက် တတိယမြောက် ဖြစ်သည်။ သူ့အထက်အကိုတို့မှာ ဦးတင် (သာယာဝတီ ထောင်မှူးဟောင်း)၊ ဦးညီပု တို့ဖြစ်ပြီး သူ့အောက် ညီနှင့်ညီမတို့မှာ မစိမ်းညို၊ ကိုညီလေး၊ မစိမ်းချို (မမြဝင်း) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
သခင်သန်းထွန်းသည် ပျဉ်းမနားမြို့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်း (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) ကို အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရာဇဝင်၊ မြန်မာစာတို့၌ ဂုဏ်ထူး သုံးဘာသာဖြင့် အောင်မြင်ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ ဆရာဖြစ်သင်ကောလိပ်တွင် ပညာဆက်လက် သင်ကြားခဲ့သည်။ ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းမှ ဆင်းပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကလေးရပ်ရှိ ဘားမား မွတ်ဆလင် အထက်တန်းကျောင်း (ယခု အထက-၆ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်) တွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့လေသည်။ ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု ကာလ ၁၉၃၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် သခင်သန်းထွန်းသည် တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၃၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် သခင်နု၊ ဦးထွန်းအေး၊ ဦးအုန်းခင်တို့နှင့်အတူ နဂါးနီစာအုပ်အသင်း တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင်လည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ အမှုဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူကာ ဆက်လက်ပါ ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပေသည်။ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်းဂါးမြို့ (Ramgarh) ၌ကျင်းပသည့် အိန္ဒိယ ကွန်ဂရက်ပါတီညီလာခံသို့ တို့ဗမာအစည်းရုံး၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်တင်အောင်၊ သခင်အုန်းမြင့် (တိုးတက်ရေး) ကိုထွန်းရှိန်၊ ကိုဗဟိန်း၊ သခင် ဆင်ဂူပတားတို့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိလာသော မာ့က်စ်ဝါဒစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုကာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၌ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင်းတွင် သခင်သန်းထွန်းသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ထောင်ကျခဲ့လေသည်။ ၁၉၄၂ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဂျပန် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၌ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင် မြေယာနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ပြင်ဆင်မှုကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ခေတ် လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့သစ်၌ မြေနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သခင်သန်းထွန်းသည် ကုန်စည်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဖတပလအဖွဲ့ကြီးကို ၁၉၄၄ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာ သခင်သန်းထွန်းသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် မဟာမိတ်များဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် သခင်သန်းထွန်းသည် နာမည်ဝှက် လက်သည်း အမည်ဖြင့် ဂျပန်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရန် ၁၉၄၅ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မှ ထွက်ခွာသွားသည်။
သခင်သန်းထွန်းသည် ၁၉၄၂ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြောင်းမြမြို့၌ နေထိုင်သော ဦးဖိုညင်း ဒေါ်ဖွားစုတို့၏ သားသမီး ၉ ဦးအနက် ပဉ္စမမြောက်သမီး ဒေါ်ခင်ကြီး (ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အစ်မ) နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ခင်ကြီးသည် သခင် သန်းထွန်းထက် အသက် ၂ နှစ် ကြီးသည်။ ဒေါ်ခင်ကြီးသည် သခင်သန်းထွန်းနှင့် အိမ်ထောင် မကျခင်က အိမ်ထောင် ၂ ဆက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမအိမ်ထောင်မှာ မြောင်းမြမြို့မှ ရဲအကြပ် ဦးစောမောင် ဖြစ်ပြီး၊ သား ခင်မောင်အေး ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ နောင်တွင် တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက်စစ်မှုထမ်းရာ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး ခင်မောင်အေး(မန္တလေး) ကလောင်အမည်ဖြစ် စာပေများ ရေးသားခဲ့သူဖြစ်သည်။
သို့သော် မလိခ၏ မြန်မာစာပေအဘိဓာန်အတွဲ(၁) စာမျက်နှာ ၁၈၉ ၌ ဦးခင်မောင်အေး၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည် –
ခင်မောင်အေး (မန္တလေး) [၁၉၃၁- ] မြောင်းမြဇာတိ၊ ၁၉၃၁ ဖွား၊ အဖဦး ဖိုးညင်း၊ အမိ ဒေါ်ဖွားစု၊ မြောင်းမြ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း တို့တွင် ပညာသင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ မှစ၍ တပ်မတော်တွင် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ မှ စ၍ ကဗျာနှင့်ဝတ္ထုတိုများကို စရေးသည်။ ကျားနှင့်မုဆိုး (၁၉၆၅) ဝတ္ထုတိုစုပေါင်းစာအုပ်ကို ထုတ်ခဲ့၏ ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာစာပေ အဘိဓာန်ကိုပြုစုခဲ့သူ ဆရာမင်းကျော်(မလိခ) အား မကွယ်လွန်မီက စာရေးသူက မေးမြန်းခဲ့ရာ –
“သူ (ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်အေး(ငြိမ်း) ရေးပေးတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ရေးသားထုတ်ဝေ လိုက်တာပါပဲ၊ အမှားအမှန်ကတော့ သူနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးခင်မောင်အေး၏ မိဘများမှာ ဦးစောမောင်၊ ဒေါ်ခင်ကြီး ဖြစ်ပါလျက် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အဖိုး အဖွားနာမည်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ထို့နောက် ဒေါ်ခင်ကြီးသည် ဦးစောမောင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် စာရေးဆရာ ပါရဂူ (ဦးလှကြိုင်)၏ ဦးလေး ဦးမောင်မောင်ကျော်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဆွေမျိုးများ၏ ခလောက်ဆန်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်ကာ နှစ်ဦးသဘောတူ ပြတ်စဲ၍ သခင်သန်းထွန်းနှင့် အကြောင်းပါခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၄၅ ဇူလိုင်လတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဒုတိယကွန်ဂရက်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ရာ သခင်သန်းထွန်းသည် ဗဟိုကောင်မတီဝင်အဖြစ် သခင်ဗဟိန်း၊ သခင်သန်းဖေ၊ သခင်တင်ထွန်၊ သခင် သန်းမြိုင်၊ သခင်မြသွင်၊ သခင်ဇင်၊ ဗိုလ်ကျော်ဇော (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) တို့နှင့် အတူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာ သခင်သိန်းဖေ (သိန်းဖေမြင့်) ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သခင်သန်းထွန်းသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဖဆပလအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၄၆ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သခင်သန်းထွန်း ဦးဆောင်သည့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလေသည်။ ၁၉၄၈ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီတွင် ဖဆပလ အစိုးရက တနိုင်ငံလုံး၏ ကွန်မြူနစ်များကို ဖမ်းဆီးရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ရာ သခင်သန်းထွန်းသည် အစိုးရကို တော်လှန်ပုန်ကန်ကာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုဦးဆောင်၍ တောခိုခဲ့သည်။ သခင်သန်းထွန်း၏ တောတွင်းလျှို့ဝှက်အမည်မှာ ဦးသာဒင် ဖြစ်သည်။
သခင်သန်းထွန်းသည် သူ၏ ကွန်မြူနစ်ပြောက်ကျားတပ်များကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမြဲတမ်းတပ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ် ကြေညာ၍ မိမိကိုယ်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သခင် ဗသိန်းတင်၊ ဗိုလ်ဇေယျ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)၊ သခင်သန်းမြိုင်၊ သခင်ချစ်၊ သခင်တင်ထွန်း၊ ဗိုလ်ရဲထွဋ် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)၊ ဗိုလ်စိန်တင်၊ ဗိုလ်စိုးမောင် တို့ကို ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ရန်အောင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)နှင့် ဗိုလ်အောင်မင်းတို့ကိုမူ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်များ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပြည်သူ့တပ်မတော်အောက်တွင် တပ်မကြီး ၄ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား၍ တပ်မကြီး (၁) ကို ဗဟိုဌာနချုပ်တည်ရှိရာ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် အခြေစိုက်ထားသည်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်ပြည်သို့ စစ်ပညာသင်ကြားရန် ပထမအသုတ်အဖြစ်ကို အောင်ကြီး (နောင် ပီကင်းပြန် အောင်ကြီး)၊ ဝေါမြို့နယ်မှ ကိုနေဝင်း၊ ပဲခူးမှ အိုင်ဆေး ခေါ် ဗိုလ်တိုက်အောင်၊ တောင်ငူမှ ကိုစံဖေ၊ ရေတပ်မှ တောခိုလာသူ ဗိုလ်မြမင်းတို့ကို သခင်သန်းထွန်း သည် စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဗဟိုကော်မတီဝင် အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရလမ်းစဉ်ကို သခင်သန်းထွန်း ချမှတ်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ၃ ပါတီ (အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗကပ၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်) ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကို ယောဒေသ ပုံတောင် ခြေခသာရွာ (ပြည်သူ့ရဲဘော်နယ်)၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ သရက်ခရိုင် မင်းလှမြို့နယ် လက်ပန်ခုန်ရွာတွင် ၃ ပါတီ ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့သော်လည်း သဘောတူညီမှု မရခဲ့ချေ။
၁၉၅၂ ခုနှစ် ပခုက္ကူခရိုင် ပုံတောင်ပုံညာ ဒေသတွင် သုံးပါတီ ညီညွတ်ရေး ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က တွေ့ရသည့် ဗိုလ်ထွန်းလင်း (ပြည်သူ့ရဲဘော်) (ဝဲ)၊ သခင်သန်းထွန်း (ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ) (အလယ်)၊ သခင်စိုး (ကွန်မြူနစ်ပါတီ-ဗမာပြည်) (ယာ)။ (ဓာတ်ပုံ – ပြည်သူ့အာဏာ ဂျာနယ်)
ထို့နောက် မြေအောက် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် သခင်သန်းထွန်းသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အထိ တာဝန်ယူခဲ့လေသည်။ ၁၉၆၃ သြဂုတ်လတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သခင်သန်းထွန်းက ပါတီအတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်ဌေး ခေါင်းဆောင်သော ပဏာမ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့ရာ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ယင်းအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် အကြိုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ပြားသွားခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ တွင် စစ်နိုင်ရေး၊ အာဏာသိမ်းရေး၊ ၆၄ လမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပြန်သည်။ ထို့နောက် သခင်သန်းထွန်းသည် ဖြုတ်၊ ထုတ်၊သတ် ပါတီတည်ဆောက်ရေး လမ်းစဉ်အမှားကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ် ၁၉၆၇ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်ဌေးနှင့် ဗကပ ပေါလစ်ဗြူရိုအဖွဲ့ဝင် ရဲဘော် ဘတင် (ဂိုရှယ်) တို့ကို သခင်သန်းထွန်း၏အမိန့်ဖြင့် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်။ တဖန် ယင်းနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဗကပ ဗဟိုကောင်မတီဝင် ဗိုလ်ရန်အောင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) အား သခင်သန်းထွန်း၏အမိန့်ဖြင့် ဗဟိုစခန်းမှ တပ်နီအမျိုးသမီး အမြင့် (ခ) မစန်းဝင်းက ခြေထောက်ဖြင့် လည်မျိုကိုနင်း၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ၁၉၆၈ ခု သြဂုတ် ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပီကင်းပြန် ဗိုလ်ထွန်းငြိမ်းကို သတ်ခဲ့ပြန်သည်။ ထိုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဗကပမှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြန်သည်။
ထို့နောက် ၁၉၆၈ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ မိနစ် ၂၀ အချိန်တွင် တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်း ပဲခူးရိုးမအရှေ့စောင်း ကျောက်ချောင်း ကမ်းပါးရှိ တောင်ကျောလေးပေါ်တွင် သခင်သန်းထွန်းသည် အခင်းသွားနေစဉ် ကြုံတိတ် ခေါ် ရဲဘော်မြကြီး ဆိုသူက ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ် ပစ်ခတ်လုပ်ကြံသောကြောင့် သခင်သန်းထွန်း ပွဲချင်းပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရသည်။
သခင်သန်းထွန်းအား ရဲဘော်မြကြီး သေနတ်ဖြင့် လုပ်ကြံပစ်ခတ်ခဲ့ပုံကို ၁၉၆၈ ခု နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ အသံလွင့်ရုံ၌ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းရှင်းလင်းပွဲ၌ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကောင်မတီဝင် ပဲခူးရိုးမတိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးမြ ခေါ် ရဲဘော်မြသည် သတင်းစာဆရာများအား အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့သည်။
“လွန်ခဲ့သည့်စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က မိမိတို့သည် တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့နယ် အနေက်ဘက် ရိုးမတောင်စွယ်တွင် ဗဟိုစခန်းချခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ ညနေ ၅ နာရီကျော်ခန့်တွင် ဥက္ကဋ္ဌသခင်သန်းထွန်းသည် အခင်းကြီးစွန့်ရန် တောင်ခြေသို့ဆင်းသွားပြီး မကြာမီပင် သေနတ်သံ တချက် ကြားရသည်။ သေနတ်သံကြား၍ မိမိကလှမ်းအကြည့်တွင် လုံချည်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မကာ တောင်ခြေမှ ဗဟိုစခန်းပေါ်သို့ ပြေးတက်လာပြီး၊ “ဘယ်ကပစ်လိုက်တယ် မသိဘူး” ဟု တခွန်းသာ ပြောနိုင်သည်။ မိမိက သေနတ်သံလာရာကို လိုက်ကြည့်အပြီး ပြန်အလာတွင် သေဆုံးသွားသည်။ နစ်ဖြူ ဆေးမှူး ကိုလှမောင်၏ စစ်ဆေးချက်အရ သေနတ်ကျည်ဆန်သည် ဘယ်နံစောင်းက ဝင်ကာ ညာဘက်နို့အုံမှ ပေါက်သွား၍ နှလုံးထက်မှ သွေးကြောမကြီး ပြတ်သွားသည်ဟု သိရသည်။ ဆေး လုံးဝကုမရတော့ဘဲ ၅ မိနစ်တွင်း သေဆုံးသွားသည်။ ထိုညမှာပင် နစ်ဖြူ ဗဟိုစခန်းကို နေရာပြောင်းရွှေ့ကာ တရက်ခရီးသွားအပြီးတွင် သခင်သန်းထွန်း ၏အလောင်းကို လျှို့ဝှက်စွာ မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ပြောကြားသွားသည်။
သခင်သန်းထွန်း အလောင်းမြုပ်နှံရာဒေသကို တပ်မတော်ကတွေ့ရှိခဲ့ပုံကို တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဦး (နောင် ထောက်လှမ်းရေး အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ် (မျက်မှန်တင်ဦး) က ပြောကြားရာတွင် –
“သခင်သန်းထွန်းအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခဲ့သူ မြကြီးပြောကြားချက်ကို မိမိတို့ဆန်းစစ်ရန် အတွက် မိမိသည် တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တပ်မ(၇၇) မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ သခင်သန်းထွန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့်နေရာသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် နစ်ဖြူများသည် စခန်းကို ဗြုန်းစားကြီး ပြောင်းရွှေ့ခဲ့၍ ပလပ်စတစ် အမိုးအစများ၊ ဝါးတိုင်များတွင် စတင်ပြတ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သခင်သန်းထွန်း အလောင်း သယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ခုတ်ယူသွားသည့် ဝါးငုတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုးဆေး ပုလင်းများ၊ သွေးစသွေးနများကိုလည်းကောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် မောင်မြကြီး၏ သေနတ်ကို စီအိုင်ဒီ (ရဲမှုခင်းတပ်ဖွဲ့) သို့ပို့၍ စစ်ဆေးခြင်း၊ သခင်သန်းထွန်း လဲကျခဲ့သည့်နေရာမှ သွေးစများကို ဒေါက်တာ မောင်မောင်တိတ် အား ဓာတ်ခွဲကြည့်စေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သခင်သန်းထွန်းအား မြှုပ်နှံထားသည့်နေရာကို နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရှာဖွေခဲ့ရာ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ဦးမြ(ရဲဘော်မြ)၏ လမ်းညွန်မှုဖြင့် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သခင်သန်းထွန်း၏ ရုပ်အလောင်းသည် ပလပ်စတစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီး မြှုပ်နှံခဲ့သည့် အတွက် ညာဘက် လက်မောင်းပင် အသားများ ရောင်ယမ်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်များ မအုံမီ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး သခင်သန်းထွန်း၏ အလောင်းကို တူးဖော်တွေ့ရှိသည့်နေ့မှာပင် ကောင်းမွန်စွာ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ပြောကြားသွားသည်။
သခင်သန်းထွန်း ကျဆုံးသောအခါ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြီးနှင့် သား နှစ်ယောက်၊ သမီး တယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ သခင်သန်းထွန်း၏ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြီး (၉၂) သည် ၂၀၀၁ ခု ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ် (၅၄) နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့လေသည်။
(က) မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁၃) စာ ၁၃၇ . ၁၄၈၊
(ခ) မလိခ မြန်မာစာပေအဘိဓာန်ပထမတွဲ ၊ သစ္စာစာပေ ပတွဲ ၁၉၇၄၊
(ဃ) သခင်သန်းထွန်း၏ နောက်ဆုံးနေ့များ ပတွဲ ၊ ဒုတွဲ၊
(င) ရှေ့သို့စာစောင် တွဲ ၁၄ မှတ် ၂ (၁၅.၁၂. ၆၈)၊
(စ) ဒေါ်ခင်မမ (ခင်ခင်သန်း) သခင်သန်းထွန်း၏ သမီးပြောပြချက်များ (၁၆.၃.၀၉)
Posted by oothandar on June 4, 2011 in For the record, Than Win Hlaing
← Cartoon Win Pe – accurate driver 2	Cartoon Saw Ngo – USDP Government’s Advisor →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...